Sida Loo Dejiyo Bandhiggaaga Muuqaal ee PowerPoint oo Daaqad Keli ah loogu talagalay Dhacdooyinka Virtual | Martech Zone
Maaddaama shirkaduhu ay ka sii shaqeynayaan guryahooda, tirada shirarka macmalka ah ayaa cirka isku shareeray. Runtii waan layaabay tirada kulamada halka soojeediyaha uu kahelayo arimo runti la wadaagayo bandhigga PowerPoint ee shaashadda. Aniguba iska dhaafi maayo tan… Dhowr jeer ayaan goof soo maray intii aan socday oo aan dib u dhigay bilowga websaydhka arrimo aan isku duray awgood.
Hal goob oo dhammaystiran, in kastoo, aan hubiyo in la dejiyey oo aan ku keydsan yahay bandhig kasta oo internetka ah oo aan sameeyo ayaa ah awoodda lagu bilaabi karo PowerPoint ku soo bandhigida daaqad halkii laga isticmaali lahaa Waxaa soojeedinaya afhayeen taas oo burburin karta… gaar ahaan haddii aad ku shaqeysid shaashado badan. Waxay qarin kartaa barnaamijkaaga dhabta ah ee barnaamijka softiweerka ah iyo daaqado ka furan shaashado kala duwan… oo lagu wareerayo hareerahaaga oo dhan.
PowerPoint waxay leedahay wax cajiib ah… hadana ay adagtahay in la helo… oo ah meesha aad ka heli karto Slide Show wuxuu ku furan yahay daaqad shaqsiyeed halkii. Dejintani waxay kuu sahleysaa inaad si fudud ugu furto Bandhigga qaabka Muuqaalka Muuqaalka, laakiin daaqad keliya oo sahal ku ah in lala wadaago Zoom ama webinar kale oo khadka tooska ah ama softiweerka kulanka ah oo si fudud loo xakameeyo bandhiggaaga adoo adeegsanaya badhanka jiirkaaga, kuwa fog, ama fallaarta.
Dejinta Muuqaalka Muuqaalka PowerPoint
Haddii aad u furto bandhiggaaga wax ka beddelka, waxaa ku jira aaladda 'Slide Show menu' ee marinka aasaasiga ah. Waxaad ubaahantahay inaad gujiso Goobaha Show Slide:
Markaad gujiso Setide Slide Show, waxaa lagu siinayaa ikhtiyaarka aad ku dejisan karto Muuji Slide daaqad shaqsiyeed. Hubi doorashadan, dhagsii OK… iyo Keydso Bandhiggaaga. Midka ugu dambeeya wuxuu noqon karaa talaabada ugu muhiimsan hadaad udiyaar garoobeyso oo waxaad fureysaa soo bandhigidaada goor dambe marka webinarku bilaabmo. Haddii aadan ku keydin adoo dejinaya awoodsiinta, Soo Bandhigida ayaa dib ugu noqon doonta qaabka Hadalka.
Soo bandhigiddan tusaalahaygu waa hal koorso oo dijitaal ah oo aan ka soo saaray Jaamacadda Butler oo hadda si caalami ah loogu adeegsado in lagu tababaro kooxda Roche. Waxaan ku qabannay aqoon isweydaarsiga kumbuyuutarka khadka tooska ah iyada oo la adeegsanayo Zoom oo lagu daray qolalka kala-sooca Zoom, Xarfaha loogu talagalay waxqabadyada, iyo qoraallada gacanta. Sababtaas awgeed, waxaan u baahday inch kasta oo ka mid ah saddexdayda shaashad si aan u daawado qolalka, kal-fadhiyada Jamboardka, fiidiyaha ka-qaybgalayaasha, kal-fadhiyada sheekaysiga, iyo sidoo kale soo-bandhigga. Hadaan furo PowerPoint-ka qaabka Gudoomiyaha, waxaan lumin lahaa 2 daaqadood oo kaliya Slide Show… waxaana laga yaabaa inaan gadaashooda ku qariyo daaqado badan oo loo baahdo.
Talo Pro: Ku keydso dejintan adoo adeegsanaya Template Virtual
Haddii aad u sameysay aaladda 'Master Slide Show template' ururkaaga, waxaan runtii kugula talin lahaa inaad keydka u keydiso labo jeer… mid ah qaabka Af-hayeenka iyo mid kale oo loo yaqaan 'Virtual mode' iyadoo la dejinayo qaabkan. Qaabkaas, sida kooxdaadu u diyaarinayso soo bandhigiddeeda dalban, uma baahna inay aadaan raadinta dejintan. Si otomaatig ah ayaa loo shaqeysiin doonaa markay abuuraan oo keydiyaan bandhigga. Marka bilowga riwaayadda, waxay un ufuri doontaa isla daaqada shaqsiga!
Muhiim ah: Ciyaar Muqaal Muqaal ah Daaqada
Maxaa ku saabsan Muhiimka ah? Muhiimadda dhabta ah waxay leedahay a ku ciyaar daaqadda ikhtiyaari ah oo nooc fiican ah. Haddii aad gujiso Play ee marinka aasaasiga ah, waxaad arki doontaa ikhtiyaari ah oo kaliya lagu ciyaaro Muqaal daaqad halkii aad ka heli lahayd shaashad buuxda. Uma muuqato taasi waa goob lagu keydin karo bandhig.
By the way… haddii aad dareentay in aan u isticmaalo Slide Show iyo Slideshow labadaba maqaalkan, waa sababta oo ah Microsoft waxay tixraacaysaa soo bandhigid toos u socota sida Slide Show halka Apple ay ku tilmaamayso inay tahay Muqaal. Ha i weydiinin sababta qaar ka mid ah shirkadahaan tiknoolajiyadda ah aysan u qaadan karin isla luuqad just Waxaan ugu qoray sidii ay u sameeyeen.
Tags: Kulamada Googlebarta Microsoft powerpointKooxaha Microsoftbandhig onlineaqoon isweydaarsiga khadka tooska ahkorontodaaqad wadaagwadaag shaashaddaBandhigga galkadeji goobaha bandhiggaslideshowdhacdo dalwaddiiwebinarwindowzoom